Nzira yekuwana nekuisa VirtualBox paLinux / GNU | Linux Vakapindwa muropa
Mune iyo Gnu / Linux nyika, iyo inonyanya kutaurwa nyaya iri kuyedza dzakasiyana siyana. Basa rakawedzera hutachiona nekutenda kune chaiwo michina uye virtualization software. Izvi zvinodaro nekuti michina iyi inotibvumidza kuisa akawanda masisitimu anoshanda sezvatinoda pasina kudzima komputa yedu kana kupatsanura hard drive yedu.
Tevere isu tichataura nezvayo VirtualBox, software yekuona, maitiro ekuwana nekuisa iyi software uye maitiro ekugadzira muchina chaiwo.
1 Chii chinonzi VirtualBox?
2 Ungawana sei VirtualBox?
3 Maitiro ekuisa VirtualBox?
4 VirtualBox Kugadziriswa
5 Maitiro ekugadzira muchina chaiwo neVirtualbox
5.1 Uye izvozvi?
Chii chinonzi VirtualBox?
Virtualization kana kuteedzera kwemamwe mapuratifomu chimwe chinhu chinogona kuwanikwa pane chero sisitimu yekushandisa, kusanganisira kugoverwa kweGnu / Linux. Inogona kunge iri nyaya yekuti isu tinoda kusarudza kushandisa kuteedzera kwechimwe chirongwa, mune iyo kesi yatichazoshandisa waini kana isu tinokwanisa kusarudza kutevedzera kana kugadzirisa rese sisitimu inoshanda.
Izvi zvinogona kuwanikwa sekureba sekunge iyo yekushandisa sisitimu yatinoda kuverengera inoshandisa mashoma zviwanikwa pane iyo Hardware yatinayo. Ichi chinhu chakakosha kwazvo kufunga nezvacho nekuti kuyedza kugadzirisa chimwe chinhu chine simba kupfuura yedu Hardware kana komputa yedu kungadzima midziyo, kumira kupindura kwechinguva kana kumisa chiitiko che software nezvikonzero zvekuchengetedza. Uku kuratidzira kunowanzoitwa mumidziyo inonzi chaiyo michina.. Izvi zvinowanzo kutarisirwa nehurongwa hwekuona.
Imwe yesoftwares ine simba kwazvo yekugadzirisa masisitimu anoshanda inoenderana nekambani yeVMWare, asi nerombo rakanaka pane rakaenzana software yakanaka, ine simba uye yakavhurika sosi yatinogona kuisa pane chero kugoverwa kweGnu / Linux. Iyi software inonzi VirtualBox.
Purogiramu VirtualBox yakavhurwa sosi uye muchinjika-chikuva, saka tinogona kugadzira michina chaiyo muWindows uye tobva tayiendesa kukomputa yedu neLinux kuti ishande.
VirtualBox ndeimwe yemapurogiramu mashoma ekushomeka anotibvumira kuti tigadzire rakaomarara hard disk muzvikamu, ndiko kuti, rinowedzera kana kurishandisa zvichienderana nemashandisiro atinoita isu. Chimwe chiitiko cheVirtualBox ndiko kugadzirwa kwemashini chaiwo munzira yekufungidzira iyo inotibatsira kutakura iwo sekunge iwo zvinyorwa zvemavara kana mifananidzo kubva kamera.
Imwe yemabhenefiti e VirtualBox ndeyekuti chirongwa ichi chinotsigira anonyanya kuzivikanwa uye anozivikanwa masisitimu anoshanda aripo, kwete chete zvakasiyana-siyana zveGnu / Linux zvakagoverwa asiwo maWindows, macOS, Solaris uye BSD shanduro.
Iyo yekupedzisira inonakidza nekuti pane vhezheni yemaseva anotibvumira kuti tigadzire michina yakati wandei nekuibata yese kubva kune imwechete server, zvichikonzera kuve nemaminetsi akati wandei asi imwe chete komputa.
Ungawana sei VirtualBox?
Sezvo nezvasara zveGnu / Linux Software, pane nzira nhatu dzekutora VirtualBox. Yekutanga yeiyi nzira ndeye kuburikidza neyepamutemo marekodhi ekuparadzira. Izvi zvinoreva kuti isu tine yakagadzikana uye inoshanda vhezheni yeVirtualBox asi kwete yazvino vhezheni yechirongwa uye neizvi hatizove nenhau dzechizvino vhezheni futi. Pari zvino Virtualbox iri munzvimbo dzekuchengetera kwekuparadzirwa kukuru kweGnu / Linux.
Imwe sarudzo ndeyekutora iyo yekuisa package kuburikidza iyo yepamutemo webhusaiti yechirongwa. Iyi sarudzo inotibvumidza kuve neyazvino vhezheni yeVirtualBox asi ichokwadi zvakare kuti haina kuyedzwa pamwe nekuparadzirwa uye inogona kutadzisa kushanda kwekuparadzira kana kusashanda nemazvo nekuda kwekushayikwa kweraibhurari.
Maitiro echitatu ekutora VirtualBox iri kuburikidza nekodhi kodhi. Maitiro aya haanyanyo kunetsa asi ane kona kwekuda ruzivo rwemberi rwekunyora kodhi uye kugadzira iyo yekuisa package. Hazvikurudzirwe kana tichida kuve neVirtualBox pakombuta yedu nekukurumidza.
Maitiro ekuisa VirtualBox?
Kuisa VirtualBox kuri nyore kwazvo. Kana tikashandisa repamutemo repamutemo, tinogona kutsvaga iyo chaiyo muchina chirongwa mune yepamutemo software maneja kana kuvhura terminal uye unomhanya inotevera kodhi:
Kana isu Ubuntu, Debian kana chero kugoverwa kunobva pane izvi. Kana isu tine Arch Linux kana chero kugovera kunobva kwazviri, isu tinofanirwa kuita inotevera kodhi:
Kana isu tisina chero izvo zvekugovera, isu tinazvo Fedora, Red Hat, kana kugoverwa kunoenderana nechimwe chezvinhu izvi, ipapo isu tinofanirwa kuitisa inotevera kodhi:
Kana isu SUSE Linux, OpenSUSE kana chero kugoverwa kunoenderana navo, ipapo isu tinofanirwa kuitisa inotevera kodhi:
Paunenge uchiita chero yeaya mirairo kana mirairo, iyo chaiyo michina chirongwa ichaiswa pamwe neese anodikanwa kutsamira kwechirongwa kuti chishande. Kana tikasarudza iyo kuisirwa kubva pasuru yakawanikwa kuburikidza newebsite yepamutemo, ipapo tinofanirwa kuita unotevera kuraira:
Kana isu tinoita zvinotevera kana pasuru iri mu rpm fomati:
Iyo VirtualBox yekumisikidza iri nyore kwazvo, zvakafanana hazvisizvo neiyo chaiyo muchina kumisikidzwa. Kana tangove ne VirtualBox yakaiswa, tinoriita uye hwindo senge rinotevera rinowoneka:
Kana isu tatova nemuchina chaiwo kubva kune kumwe kumisikidza, ipapo unozoonekwa mukoramu yekuruboshwe pasi iyo Nyowani uye Zvirongwa mabhatani. Kazhinji hazvidi kuita shanduko dzakawanda asi kana tichida kuti dzishande zvakakwana ipapo isu tinofanirwa kuenda kuFaira uye zvaunoda. Mukufarira hwindo senge rinotevera rinowoneka:
Mariri tinowana akasiyana maitiro akajairwa ayo edu chaiwo michina ichave iine, pakati pavo kuiswa kwemashoko, kazhinji mbeva nekhibhodi; saizi yakaenzana yechidzitiro uye kugadzirisa kwayo; mutauro wekushandisa; iyo yekubatanidza netiweki iyo chaiyo michina ichave iine; izvo zvinowedzerwa izvo zvatinogona kuwedzera uye kana tichida kumisikidza proxy. Ini pachangu, chinhu chete chandinowanzo shandura ndicho General tab kero yedhisiki rangu rakaomarara apo michina chaiyo inogadzirwa ichachengetedzwa.
Ose ari muMakina uye maGroup mamenu isu tine zviito zvakasiyana nemuchina chaiwo: kubva mukugadzira muchina mutsva, kuifambisa kubva panzvimbo kuenda kuchikonono. Pane mapfupi ezviito izvi asi kudonhedza hakusi, kunongowanikwa muMushini menyu uye inoshandiswa kubatanidza michina chaiyo, chimwe chinhu chinobatsira kunyangwe usinga zvitende.
Maitiro ekugadzira muchina chaiwo neVirtualbox
Kuva neruzivo rwekuti VirtualBox inoshanda sei, ngatione maitiro ekugadzira muchina wekumisikidza yekuisa iyo Gnu / Linux kugovera. Kutanga tinofanirwa kuvhura chirongwa uye tinya bhatani Idzva. Iwindo rakadai rinotevera richaonekwa:
Tinofanira kuwedzera zita remuchina chaiwo, zvakanaka kuidana nehurongwa hwekushandisa. Wobva wasarudza mhando yeanoshanda system yatinozoisa, mune ino ichave Linux uye wozosarudza kugovera kwatichaisa, mune ino Ubuntu. Tinodzvanya inotevera uye yegondohwe memory screen ichaonekwa.
Izvi zvakakosha zvikuru: HAPANA kumbofanira kuisa gondohwe ndangariro kupfuura hafu yatiinayo. Ndokunge, kana isu tine 4 Gb tisingambo wedzera anopfuura 2 Gb kumuchina, kana tine 2 Gb hatizokwanise kuwedzera anopfuura 1 Gb. Izvi zvakakosha nekuti kana tikasaita zvinoenderana nazvo, iwo chaiwo muchina kana komputa yedu haizoshanda nemazvo.
Dzvanya zvinotevera uye iro rakaomarara diski hwindo richaonekwa. Tinosarudza sarudzo "Gadzira iri rakaomarara hard disk" uye tinya bhatani rekugadzira.
Pachiratidziro chinotevera tinochisiya chakamiswa, ndokuti, gadzira VirtualBox hard drive uye tinya zvinotevera. Pachirongwa chinotevera isu tinomaka sarudzo "Yakachengetedzwa zvine simba"Izvi zvinotaurira chirongwa kuti chisachengetera magigabytes edhisiki rakaomarara asi kuti uvatore zvinoenderana nezvinodiwa nemuchina chaiwo, nguva dzose usingapfuure muganho unoratidzwa pazasi.
Iye zvino tinofanirwa kuratidza kuti ndeupi hukuru hwakanyanya hwe hard disk remuchina wedu muchina. Paunenge uchisarudza iyo inoshanda sisitimu, VirtualBox yatotisiya isu yakatarisira hushoma huwandu hunodiwa. Mushure mekumisikidza, tinodzvanya bhatani rekugadzira uye tichava nemuchina wedu chaiwo. Iye zvino isu tinongofanirwa kumakina iyo chaiyo muchina uye tinya iyo "Kutanga" bhatani kuti iro chairo muchina umhanye.
Tinogona kuona kuti mushure memasekondi akati wandei, muchina chaiwo unosviba nedash chena. Izvi imhaka yekuti hapana sisitimu yekushandisa yakaiswa, isu tinofanirwa kuwedzera izvo. Kuti tiite izvi, tinowana ISO mufananidzo weUbuntu uye mushure meizvozvo tinoenda kuVirtualBox kumisikidzwa. Uye Mukuchengetedza, pane diski ine + chiratidzo, tinoratidza iyo ISO mufananidzo. Tinodzvanya bhatani rekubvuma uyezve mushure mekutanga muchina, iyo ISO Image ichaitwa uye kuisirwa kwekugovera kuenderera.
Unogona kusazviona zvichibatsira kugadzira muchina chaiwo, asi mushure mekushandisa akati wandei michina, iwe unonzwisisa kubatsira kweiyo software mukati mekuparadzaniswa kweGnu / Linux: kubva mukugona kuyedza vhezheni itsva yekuisa vhezheni yeWindows. Saka kugadzirisa matambudziko mazhinji anotarisana nevashandisi veLinux zuva nezuva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Maitiro ekuwana nekuisa VirtualBox paLinux / GNU
Eulogius Ximeno akadaro
Ichi chinyorwa chakanyanyisa. Chero ani anoziva kurodha pasi software uye kuiisa. Izvo zvisina munhu anonyora ndizvo zvinhu zvisiri pachena, sekumisikidza vhezheni yeVirtualBox yeLinux uye kubva kune rakaomarara diski, kana maitiro ekuisa VirtualBox paPC ine yekare processor uye mamaboard. Ndokumbirawo unyore nezve chimwe chinhu chakakodzera kuverenga.
Pindura kuna Eulogio Ximeno
Anyelo Ruiz akadaro
Pindura kuna Anyelo Ruiz
MuseScore - yakakurumbira muchinjika-chikuva mamaki edhita